Apple wuxuu ku hagaajin doonaa Apple Watch Series 2 dhibaatooyinka batteriga si bilaash ah | Wararka IPhone
Toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa jiray kiisas qaar ka mid ah dadka adeegsada Apple Watch oo ogaaday in shaashadooda saacaddu ay go'day, ama in saacaddu dansan tahay oo aan dib dambe loo shidanayn. Kuwani waa dhibaatooyinka batteriga ee ka dhacaya moodooyinka qaarkood ee Apple Watch Series 2 iyo in Apple ay hada aqoonsatay iyadoo siineysa xal.
Dhibaatadu waxay dhacdaa markii batteriga saacaddu uu xumaado, oo xitaa duruufaha qaarkood way bararaan, taasoo keenta in shaashadda ay ka go'do ama xitaa ay ka go'do saacadda gebi ahaanba. Haddii tani ay tahay kiiskaaga, ha ka welwelin maxaa yeelay xalka ay bixiso Apple waa dayactirka bilaashka ah ee saacaddaada. Waxaan kuu soo bandhigeynaa dhammaan macluumaadka hoose.
Dhibaatada waa la ogaaday kaliya moodooyinka 42mm ee Apple Watch Series 2, labadaba moodooyinka Ciyaaraha sida Nike +, Hermes ama kan birta ah. Apple wax kama dhaho 38mm moodooyinka sidaa darteed waxay umuuqataa in cabirka Apple Watch Series 2 laga dhaafi doono dhibaatadan. Dadka wax iibsada ee soo arkay mid ka mid ah dhibaatooyinkaan waxay aadi karaan Apple Store ama xarunta adeega ee loo idmaday saacaddoodana si buuxda oo lacag la’aan ah ayaa loo dayactiri doonaa. Xitaa haddii ay ahayd inay mar hore dayactiraan batterigooda sababtaas awgeed, waxay dib ula soo noqon doonaan lacagtaada.
Apple waxay ku sheegtay dukumiintigeeda gudaha in xaaladda damaanad qaadka aaladda uusan wax micno ah lahayn. Yurub gudaheeda halka damaanadku yahay labo sano moodeelkan wali wuu daboolan yahay, laakiin wadamada kale waa hal sano oo kaliya, marka horeyba waxaa u jiri lahaa moodello dammaanad ka baxsan. Si tan looga fogaado wuxuu kordhiyay caymiska ilaa seddex sano Haddii ay tahay sababtan, markaa ma aha oo keliya kuwii horeba u dhibaatoobay inay ka faa'iideysan doonaan barnaamijkan dayactirka bilaashka ah, laakiin kuwa ku dhibaateysan mustaqbalka sidoo kale way ka faa'iideysan doonaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple wuxuu hagaajin doonaa Apple Watch Series 2 oo leh dhibaatooyin batari bilaash ah
Christian eric dijo
Saaxiibbadii iyo jiilkii ugu horreeyay ee Apple Watch haddii ay sidoo kale ballaariyaan dammaanadda 3-da sano ah ee batteriga ku jirta mise waxay ahayd xan?
Jawaab Cristian Eric
Apple waxay u oggolaan kartaa horumariyeyaasha inay u sameystaan ​​taleefannada Apple Watch